အခ်စ္ေရး Archives - Achawlaymyar
ယောက်ျားတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အရာ (၅) မျိုး
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ဆွဲငင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းအပူခံပြီး စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အဖြေလေးတွေ ရှိပြီးသားမို့လို့ပါပဲ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ယောက်ျားတိုင်းကြိုက်န်ှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လွတ်လပ်တယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ချိတုံချတုံမဖြစ်ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကို လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလည်း တာဝန်ယူနိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ (၂) ထက်မြက်ပြီးအလုပ်ကြိုးစားတယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကလေးဆန်တာမျိုးတွေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ တည်ငြိမ်ပြီးအခြေတကျရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ ထက်မြက်ပြီး အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့၊ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့အမြင်မှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ (၃) စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုဂရုစိုက်တယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ ရုပ်လှတာကိုကြိုက်ရုံမကပါဘူး။ စိတ်ထားလှတာကိုပါသဘောကျတဲ့သူတွေပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး၊စိတ်အလှကိုလည်း ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားတွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပါပဲ။ … Read more
Crush က သင့်ကိုပြန်ကြိုက်လာစေမယ့် အလွယ်ကူဆုံးနည်း(၈)မျိုး…
အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ပြောမယ်နော်။ ဘာမှမသိပဲ cb ကနေ မစပါနဲ့။ စရင်လည်း ထမင်းစားပီးပီလား၊ ရေချိုးပီပီလား စတဲ့ ဂလယ်အူကြောင်တွေသွားမမေးပါနဲ့။ လူတော်တော်များများ မှားကြတဲ့အချက်တွေ …. ဆိုတော့ကာ အောက်ကအချက်လေးတွေ အရင်လုပ်ပါ …။ ၁။ အရင်ဆုံး သူကိုယ့်ကိုသတိထားမိလာအောင် လုပ်ရမယ်။ သူ့ပို့စ်မှန်သမျှ react တခုခုပေး ( likeတော့ မပေးနဲ့။ အသဲကြီးပဲလဲစွတ်မပေးနဲ။့ စိတ်မကောင်းစရာ ရေးထားရင် sad ရီစရာဆို ha ha ဖီးလ်ပို့စ်ဆို sad) အ့လိုတလှည့်စီပေး အစုံ။ ၂။ ပြီးရင်ပိူ့စ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေရေး ( အချောလေး ဂုညတော့ မလုပ်နဲ့ ) သူများသတိမထားမိတဲ့ အရာလေးတွေ မန့်ပေး။ ဥပမာ လည်ပင်းနားမှာ မဲနေတယ်နော်။ လက်သည်းနီက ဒီအရောင်လေးနဲ့ လိုက်တယ် … Read more
အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ရှိသွားသူတိုင်း ရရှိလာမယ့် ခံစားမှု (၅) မျိုး
အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့ရှိသွားသူတိုင်း ရရှိလာမယ့် ခံစားမှု (၅) မျိုး လူတစ်ယောက်အကြောင်းက အကြောင်းမရှိဘဲ ခေါင်းထဲရောက်ရောက်လာရင် ၊ ဆုံမိရင် ရင်ခုန်နေတာမျိုးဆိုရင် ဒါဟာအချစ်ပါ။ အချစ်စစ်ဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့ရတဲ့အရာ မဟုတ်သလို အတင်းလုပ်ယူလို့ရတဲ့အရာမျိုးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ကိုယ့်သင်ထက် ချစ်ရမယ့် သူမျိုးကို တွေ့နေပြီးဆိုရင် သင်ဟာ အချစ်ကို တွေ့နေပါပြီ။ သင်အချစ်ကို တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲလာမှာပါ။ (၁) ခံစားချက်တွေနားလည်လာမယ် စုံတွဲတိုင်းမှာတေ့ာ နားလည်မှုရှိမှ ပျော်ရွှင်ရတဲ့ချစ်သူဘ၀ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ။ တစ်ယောက်ဘက်က ချည်းနားလည်ပေးနေလို့ မရပါဘူး။တစ်ယောက်က နားလည်ပေးတဲ့အချိန် တစ်ယောက်က အလိုက်သိနေပေးရမှာပါ။ တကယ်ကို အချစ်စစ်နဲ့တွေ့ရှိသွားတဲ့ စုံတွဲတွေကတော့ ချစ်သူက စိတ်တွေညစ် ၊ စိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့ အချိန်တွေဆို ဘေးကနေ အားပေးပြီး နားလည်ပေးလာတတ်ကြတယ်။ ချစ်သူရဲ့အလုပ်ကိစ္စ ၊ ဝါသနာတွေကို နားလည်ပေးလာကြတယ်။ … Read more
တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေကျ အရမ်း ကံကောင်းတယ်
တစ်ချို့ မိန်းကလေးတွေကျ အရမ်း ကံကောင်းတယ် သိပ်မချောလည်း သူ့ကောင်လေးက ကြင်ကြင်နာနာချစ်တယ် ဝေးနေတဲ့ အချိန်မှာလည်း သစ္စာမပျက်ဘူး အသည်းကွဲတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဒနာလည်း မခံစားဖူးဘူး။ အရင်ဆုံး ချစ်မိတဲ့သူနဲ့ပဲ လက်ထပ်ပြီး ဘဝကို ရိုးမြေကျ အတူဖြတ်သန်းခွင့် ရတယ် …။ ကိုယ့်ကောင်မလေး ကိုယ့်ကြောင့်ပျော်နေရတာကိုပဲ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး ကျေနပ် နေတတ်တာ အေးအေးဆေးဆေး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး ကိုယ့်ချစ်သူကို စိတ်မပူစေတာ … သံသယ မများစေတာ၊ သူ့အတွက်ဆိုတာထက် ကိုယ့်အတွက် ဆိုတာမျိုးပဲ အမြဲဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာ မိန်းမတွေ အများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာမှ ကိုယ့်ကောင်မလေးကိုပဲ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်လို့ သတ်မှတ်ထားတာ၊ အဲ့လိုယောကျ်ားမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ မိန်းကလေးက သိပ် ကံကောင်းတာပဲ …။ လောကမှာ ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးရှိပြီး အသည်းကွဲလို့ ထင်ရာစိုင်းနေတဲ့ မိန်းမတွေလည်း မြင်ဖူးတယ် … Read more
အရြယ္ေရာက္လို႔ ရည္းစားထားတာမင္းအျပစ္မဟုတ္ဘူး လူေရြးမွားရင္ေတာ့မင္းအျပစ္ပဲ …
အရြယ္ေရာက္လို႔ ရည္းစားထားတာမင္းအျပစ္မဟုတ္ဘူး လူေရြးမွားရင္ေတာ့မင္းအျပစ္ပဲ ဒီမွာ…ညီမေလး ကိုယ့္ကို တစ္ကယ္ မခ်စ္တဲ့လူအတြက္ ေပးဆပ္ေနရတာ တန္ရဲ့လား ကိုယ့္ကို ဥေပကၡာျပဳထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ဆက္ခ်စ္ေနရင္ေရာ…အဆင္ေျပနိုင္ပါ့မလား… … ကိုယ့္အခ်စ္ေတြကို တန္ဖိုးမထားတတ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္…နာက်င္ခံစားေနရတာေတြ ကိုယ္ေပးသလို ျပန္ရလာနိုးနိုးနဲ႔ ေမ်ာ္လင့္ေနရတာေတြက ျဖစ္သင့္သလား ေသခ်ာစဥ္းစားပါအုံး… ညီမေလး သိထားပါ… …တစ္ကယ့္အခ်စ္စစ္က << 50000 က်ပ္ဝန္းက်င္နဲ႔ 360 ဒီဂရီလွည့္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ CCTV ရွာေနပါသလား? >> ကိုယ္က ေပးမွျပန္ရတာ မဟုတ္ဘူး…ကိုယ္က မေပးရင္ေတာင္ သူ႔ဘက္က ေပးခ်င္ေနတာမ်ိဳး ညီမေလး…တန္ဖိုးထားၿပီးကိုးကြယ္ေနတဲ့…အခ်စ္ဆိုတာ… သူ႔အတြက္…ပ်ံက်ေဈးတန္းမွာ ေရာင္းေနတဲ့… မုန႔္ဟင္းခါးတစ္ပြဲေလာက္ေတာင္ တန္ဖိုး ရွိခ်င္မွရွိမွာပါ… … ဒီမွာ ညီမေလး…တန္ဖိုးဆိုတာ ထားတတ္တဲ့သူဆီေရာက္မွ တက္တာပါ ညီမေလးရဲ့ ေရႊလို အဖိုးတန္တဲ့ အခ်စ္စစ္က သူ႔လိုႏြားအတြက္ … Read more